ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ရေးခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 21, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ WordPress တင်းပလိတ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လူအနည်းငယ်မှအကြံဥာဏ်များအနည်းငယ်သင်ယူပြီးသောကျွန်ုပ်၏တင်းပလိတ်ကိုဂရုတစိုက်ပုံဖော်ခဲ့သည်။ စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ကနေ tags တွေအားလုံးကိုငါတတ်နိုင်သမျှညှစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ် template ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်း - ကျွန်ုပ်၏ visitors ည့်သည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် Search Engines, အဓိကအားဖြင့် Google မှလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့သည် Search Engines အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း SEO ဆိုသည်မှာ ငါ၏အပို့စ်များကိုမဖြစ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများသတိပြုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ပထမစာကြောင်းအနည်းငယ်တွင်ခေါင်းစဉ်ကိုထပ်မပြောပါ။ ငါသည်ငါ့ပို့စ်များကိုအတွက်တစ်တန် link တွေကိုမသုံးပါ။ အမှန်တကယ်ဆွေမျိုးမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပို့စ်များကိုမကြာခဏချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုပါ။ တစ်တန်ဖတ်ပြီးလျှင် SEO ဆိုသည်မှာ ဆောင်းပါးတွေ၊ ကျွန်တော်ဟာငါစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုရေးနိုင်တယ် သင့် ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီကိုလုပ်ပါ
ငါ Search Engine တွေမရေးတော့ဘူး။ စာဖတ်သူတွေအတွက်တော့ငါရေးတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ရဲ့ဆောင်းပါးများကိုသော့ခလောက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အချို့သောဝဘ်ရှာဖွေစက်ပေါ်ရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များကကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းပုံစံကိုပြောင်းရန်ရူးသွပ်နေပုံရသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကကျွန်တော့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့ရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ စာဖတ်သူကငါ့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကိုနှစ်သက်တယ်။
ဒီဆောင်းပါးတွေကိုခဏလောက်ဖတ်ဖူးပြီးတဲ့နောက်တခြားဘလော့ဂါတွေလုပ်တဲ့အခါငါတကယ်သတိထားမိနိုင်တယ်။ အဲဒီဘလော့ဂါတွေကိုသတိပေးလိုက်တာပဲ skip ဖတ်ရန် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်သင့်ရဲ့ပို့စ်တွေအများကြီး။ ရံဖန်ရံခါမှာစာရင်းသွင်းတာကိုရပ်လိုက်တယ်။
ဤဘလော့ဂါများကိုပြောရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသူတို့၏ထင်မြင်ချက်ပေးသူများမှဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ဘလော့ဂ်သို့သွားသောအပတ်တိုင်းမတူညီသောဝေဖန်သူများနှင့်တွေ့လေ့ရှိသည်။ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းတွေမရှိဘူး။ ဒီမှာမှတ်ချက်တွေနဲ့စာဖတ်သူတွေကဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ဘလော့ဂ်မှာတူညီတဲ့ရှေးရှေးကိုထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ရတာကိုငါတကယ်ပျော်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် visitors ည့်သည်တော်များများနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လာသည် - ကျွန်ုပ်သည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသော်လည်း
တိုက်ရိုက်စျေးကွက်နောက်ခံရှိသူများသည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုသုတေသနပြုခြင်းကစာဖတ်သူအသစ်များရရှိရန်လက်ရှိရှိပြီးသားများကိုသိမ်းထားရန် ပို၍ ခက်ခဲကြောင်းပြောထားသည်ကိုသိကြသည်။ Search Engine နေရာချထားရေးကိုသင်ရေးရန်သင်ရေးသည့်အခါ၎င်းသည်ကိုယ်တိုင်ရှုံးနိမ့်သည့်နည်းဗျူဟာဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင့်စာဖတ်သူများသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိကြပါ။ Search Engines မှပိုမိုများပြားသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်သင် ဆက်လက်၍ အစဉ်အမြဲထိန်းထားရန်လိုအပ်သည်။
Search Engine အတွက်မရေးပါနဲ့။ သင့်စာဖတ်သူများအတွက်စာရေးပါ။
မတ်လ 22, 2007 မှာ 1: 02 AM
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြိုးစားနေပါသည်။ နေရာချထားရေး အပြင်မှာ စာဖတ်သူတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မေ့သွားပုံရတယ်။
မတ်လ 24, 2007 မှာ 9: 08 pm တွင်
ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းသည် အမှန်တကယ် ပတ်သက်မှုမရှိပါက ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် ပို့စ်များနှင့် မကြာခဏ လင့်ခ်ချိတ်လေ့မရှိပါ။
ကိုယ့်ပို့စ်တွေကို ဘယ်တော့မှ မလင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အများစုက ကျွန်တော့် ပို့စ်တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု လိုက်မလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ၎င်းတို့သည် ယခင်ပို့စ်များနှင့် မည်သည့်ဆက်စပ်မှုမျှ (သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မျှသာရှိလျှင်) လက်ရှိအချိန်၏ ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်သာ ရှိကြသည်။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 3: 25 pm တွင်
ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို စပြီးလုပ်တော့မယ်လို့ တွေးလိုက်၊ စာမျက်နှာအဆင့်တွေရဖို့အတွက် စာရေးလိုက်၊ နောက်တော့ စာစရေးတဲ့အခါ၊ အဲဒါက ငါမဟုတ်သလို ခံစားရတယ်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့။ ငါလုပ်မယ် ဆိုရင် ငါ့စည်းမျဥ်းနဲ့ တခြားသူ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ရေးတာ တစ်လပဲရှိတော့တယ် လင့်ခ်တွေမဟုတ်ဘဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်ရတာကို သဘောကျတယ်။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 4: 37 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Latimer မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ ငါပြီးသွားပြီ (ငါတို့မှာ တူညီတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် - JD က စီးပွားရေး၌အနက်ရောင်. မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို အရမ်းစဉ်းစားပြီး ရေးထားတာပါ… တကယ်ပေါက်ကွဲစေမယ့် အကြောင်းအရာများစွာကို သင်ထိမိပေမယ့် အငြင်းအခုံရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကို လေးစားစွာနဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။
မင်းဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ blogosphere မှာ ဆောင်းပါးတွေ အများကြီးဖတ်တယ်။ သင့် လုပ်နေတာ… အများစုကတော့ BS လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထင်ပါတယ် အဲဒါက တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘယ်လိုပြောပြရမှန်းမသိ ဖြစ်နေလို့ပါ။ သင့် သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားစမြည်ပြောပါ။
ရပ်တန့်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 5: 11 pm တွင်
Doug မှ ရပ်တန့်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် ကျွန်ုပ်ပြောသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်သည် ထင်မြင်ယူဆချက်အားလုံးကို နားထောင်ရန် အမြဲဖွင့်ထားပြီး မည်သည့်ပြဿနာအတွက်မဆို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 3: 29 pm တွင်
ဒီပို့စ်မှာ မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို ငါအရမ်းသဘောကျတယ်လို့ မင်းကိုပြောပြချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကို လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ကမှ စတင်ခဲ့ပြီး ဤအရာကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေသောကြောင့် သင့်အကြံဉာဏ်သည် အမှန်တကယ်ပင် မှန်ကန်သောကြောင့် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်တော် ဒီတစ်မိနစ်လောက်သာ ရောက်ဖူးပေမယ့် ရေတွက်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ သွေးဆောင်မှုကို တွန်းလှန်ခဲ့ရပါတယ်။ အက်ကွဲစွဲလမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ သင်သိပါသလား။ ပိုများသောစာဖတ်သူများ၊ ကျွန်ုပ်တွင် နောက်ထပ်စာဖတ်သူများ ရှိရပါမည်။
ဒါပေမယ့် အခု မင်းရဲ့ ပို့စ်ကို ငါဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ အသံလေးတစ်ခုလို ပြန်ပေါ်လာတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ အပါယ်ကျတယ်။ "မင်းသိတာကိုပြောပါ၊ မင်းပြောသလိုပဲပြောပါ၊ သူတို့လာလိမ့်မယ်။"
"အိပ်မက်နယ်ပယ်" အတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 5: 08 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Keith။ လူတိုင်း (ဘလော့ဂ်ပြင်ပမှာတောင်) အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရှာကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ SEO၊ လင့်ခ်များ၊ diggs စသည်တို့ကို မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ကို တစ်ခါတစ်ရံ တွေးတောနေမိပါသည်။ ဤပို့စ်ကိုရေးသားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ သိမ်းဆည်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိုင်းမှာလည်း!
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 5: 53 pm တွင်
ပို့စ်ကောင်း။ ကျွန်တော်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက် မရေးရန် ကြိုးစားသော်လည်း ၎င်းကို စဉ်းစားမိကြောင်း ဝန်ခံလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်များ၏ ခေါင်းစဉ်အချို့တွင် (အဓိက ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေပါက) ကျွန်ုပ်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှ ကောက်ယူနိုင်သော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ ငါဒါကိုမလုပ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်အများကြီးရှိနိုင် (ငါ့အတ္တကိုကျွေးမွေးရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်) ။ ငါပြောတာကို လူတွေဖတ်စေချင်လို့ လုပ်တာပါ။ ပြန်လည်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းသည် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်တော်ဟာ လူကောင်းတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အများကြီး သင်ယူရပါတယ်။
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 9: 40 pm တွင်
ယုံသည်ဖြစ်စေ မယုံသည်ဖြစ်စေ သင်အမှန်တကယ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် သင့်စာဖတ်သူများအတွက် ရေးသားနိုင်ပါသည်။
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 9: 59 pm တွင်
ဒီလိုသရုပ်ပြဖို့ မင်းကို ငါစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သံသယ မရှိပါဘူး - နှစ်ခုစလုံးကို လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိမယ်ထင်တယ်။ သို့သော် မည်သည့်ဥပမာကိုမျှ ကျွန်ုပ်မဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ (စာရေးဆရာက ဒီနည်းပညာနှစ်ခုလုံးကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်လို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။)
ကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့ ကျပန်းပို့စ်တစ်ခုကို တွေ့ချင်ပြီး အဲဒါကို ကောင်းကောင်းရေးပြီး Search Engines အတွက် နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 7: 49 AM
ဟေ့ Doug –
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့အသံကို စွန့်စားရတဲ့ အန္တရာယ်မှာ၊ ဒါက ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသွားအလာကောင်းလာပြီး ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေလည်း နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ငါဖန်တီးထားတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုပါ။
မညည်းမညူ လက်ကောက် စည်းကမ်းများ- သင်သည် ၎င်းတို့ကို လိုက်နာနေပါသလား။
မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ငါသိတယ် လို့ဝန်ခံပါတယ် — တစ်ခါတလေမှာ ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေထက် SEO ကို ပိုပြီးမျက်နှာသာပေးခဲ့ပေမဲ့ ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေကလည်း ငါ့ကို သဘောကျတဲ့အတွက် ပြန်လာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။
ငါနဲ့တူတယ်။ Ilker Yoldas ၏ TheThinkingBlog.com: ကျွန်တော် သူ့ကို ကြိုက်လို့ ဆက်ဖတ်နေတော့ သူက SEO ရေးနိုင်သလို သူ့ပုံမှန်စာဖတ်သူအဖြစ်လည်း ရှိနေမှာပါပဲ။
ဂရုစိုက်ပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 10: 10 AM
ကျေးဇူးပါ Paula။ မင်းက ဒီနည်းလမ်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းငါ့ရဲ့ ပရဝုဏ်ကို အမှန်တကယ် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။ ပထမစာပိုဒ်အချို့တွင် “မညည်းညူသောလက်ကောက်” အကြောင်းကို အကြိမ်များစွာဖော်ပြခြင်းသည် မှန်ကန်သည်မဟုတ်ပါ - မင်းကငါ့ကိုပြောနေသလိုမျိုးထက် SEO က ဦးစားပေးလို့ ရေးထားပါတယ်။
ပို့စ်က အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး လမ်းမှားမကူးပါနဲ့။ သို့သော် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ၎င်းတို့အတွက် ရေးရန်မလိုအပ်ဘဲ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေနိုင်သောအခါတွင်၊ ဤသည်မှာ ပို့စ်တစ်ခုရေးခြင်း၏ သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်မလား။
ဖြစ်ချင်တော့ ငါသွားခဲ့တယ်။ ဒီပို့စ်က Thinking Blog မှာ ပထမအပိုဒ်ပါရှိသည်။ 21 သူ့ဘလော့ဂ်သို့ နက်နဲစွာ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ၎င်းတွင် အခမဲ့လင့်ခ်များ။ ထိုလင့်ခ်များသည် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက် သက်သက်ဖြစ်သည်။
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 10: 14 AM
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါမလုပ်ဘူး။ အရေးကြီးသော SEO စကားစုများကို ထပ်ခါတလဲလဲနှင့် ရဲဝံ့စွာပြောပါ။ လူတွေကို မတွေ့စေချင်ရင်၊
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက SEO သမားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝပဲ…
SEO-Google ဂိမ်းတစ်ခုလုံးသည် အနာဂတ်တွင် မည်သို့ပြောင်းလဲလာမည်ကို ကျွန်ုပ်တွေးမိပါသည်။
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 10: 23 AM
ဝိုး! နှစ်ချက်၊ ကျေးဇူးပါ Paula။
ဇန်နဝါရီလ 23 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ4နာရီ 20 မိနစ်
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အချိန်ကိုက်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များသည် စာဖတ်သူအတွက် အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ဟု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးက စောင်းငေါ့ပြန်ကြားခဲ့သည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အစည်းအဝေးတစ်ခုမှ ထွက်ခဲ့ပြီး “ဤစာမျက်နှာများသည် စာဖတ်သူများအတွက် မဟုတ်ပါ။ ဤစာမျက်နှာများသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ဖြစ်သည်။" တစ်စုံတစ်ယောက်သည် လူသားများဖတ်မရသော စာမျက်နှာများကို အမှန်တကယ် ပိုနှစ်သက်သည်ဟူသော ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကို ယခုအချိန်အထိ လျှောက်လှမ်းနေခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်အား ခေါင်းကုတ်စေသည်။ ငါ့စိတ်ကို မှုတ်ပေးတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးရာတွင် နိုင်ငံခြားအကြံအစည်တစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ ပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး၊ ဒီပို့စ်ကို ငါ့ကုမ္ပဏီက လူတချို့ဆီ ပို့လိုက်တယ်။